Hulka: Ma aadi doono PSG ee waxaan aadayaa Chelsea | Starfm.co.ke	Sunday, May 19th, 2013	Home
Hulka: Ma aadi doono PSG ee waxaan aadayaa Chelsea
Share21.June.2012;- Ciyaaryahan Hulk ayaa sheegay in uu ugu danbayn ku biiri doono kooxda Chelsea isagoo ku tilmaamay horyaalka Premier League in uu yahay kan uu xiiseynayo
Xidiga qaranka Brazil ayaa loo saadaalinayaa in uu isaga tagayo Porto xagaagan waxaana isha kuhaya dhamaan kooxaha ka dhisan Europe oo ay ugu horeyso Paris St Germain.
Chelsea ayaa mudo badan lala xariirinayay weeraryahankan in ay lasoo wareegi doono ilaa markii kooxda uu gacanta ku qabtay macalin Andre Villas-Boas waxaana uu isku dayay in uu keeno Stamford Bridge.
Kadib ceyrintii Villas-Boas Macalinka cusub ee Blue’s Roberto di Matteo ayaa sii waday ugaarsashada laacibkan
Chelsea ayaa hada rajaynaysa in ay noqoto kooxda ugu danbaysn soo qaadata xidigan iyadoo ay todobaadkan soo bandhigtay PSG lacag dhan £43million, oo £13m kabadan lacagta ay Blues ku doonayso xidigan
Laakiin ciyaaryahan Hulk ayaa shaaca ka qaaday in in uu udhaqaaqayo England waligiisna uusan aadi doonin France.
25-jirkan ayaa yiri ’Chelsea waa hada kooxda haysata Champion Leage ciyaaryahan kastana waa uu rabaa anigana wax iga reebaya malahan aad ayaana ugu faraxsanaan lahaa hadaan ku biiro.
‘wax kasta waxaan udweynayaa Porto. waxaan hada kooxda kula joogaa heshiis aad ayaana ugu faraxsanahay in aan Porto kusugnaado mudo afar sano ah”ayuu sheegay laacibkan.
Xidigan ayaa lasoo sheegayaa in ku biiristiisa Chelsea ay dhowdahay waxa hortaagana ay tahay lacagta oo labada koox isku mari la’yihiin.
Roman Abramovich ayaa u arka xidigan in uu yahay badalka kaliya ee Didier Drogba kaas oo kooxda ka tagay.
Local News	Madaxwayne Kenyatta oo meesha ka saaray kordhinta mushaaraadka xildhibanada .	May 19, 2013 Madaxwayne Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu meesha ka saaray suura galnimada in mushaarka loo kordhiyo xildhibaanada baarlamaanka xiligan ...	Booliska dagmada wajeer oo bilaabay baaritaanka sargaal xalay halkaasi lagu dilay .	May 19, 2013 Xaalada dagmada Wajeer ayaa dagan saakay ka dib markii xalay halkaasi lagu dilay saargaal sare oo ka tirsan ...	Kenya iyo Tanzania oo si wadajir ah howlgal ammaan uga fuliyay xuduuda ka dhaxaysa	May 18, 2013 Kenya iyo Tansaaniya ayaa si wadajir ah soohdintooda uga fuliyay howlgal ammaan kadib markii laba todobaad ka hor ...	Garsoore sare oo ka tirsan maxkamada sare oo shaqadiisii hakad la galiyay.	May 18, 2013 Gudiga adeega Garsoorka ee loo soo gaabiyo JSC ayaa hakad galiyay howlihiisa garsoore sare oo ka tirsan maxkamada ...	Shil gaari oo qasaare geestay oo ka dhacay Narok	May 18, 2013 Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay mid kalena waa uu ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay ...	Madaxweyne Uhuru kenyatta oo la kulmay dhamaan gudoomiyayaasha Deegaanada Dalka	May 18, 2013 Madaxweyne Uhuru kenyatta ayaa la kulmay dhamaan gudmooyiyaasha Countiyada 47 Counti wadanka.
Wariyaha Starfm ...	kenya oo doonaysa in la kordhiyo tirada AMISOM	May 17, 2013 Dowlada dalkani kenya ayaa doonaysa in la kordhiyo tirada ciidamada nababad ilaalinta Midowga afrika Amisom ee ka howlgala ...	Xeer ilaaliyaha guud oo sheegay in baaritaankii lagu sameeyay rabshadihii tana Riiva dhawaan la soo bandhigi doono.	May 17, 2013 Xeer ilaaliyaha guud ee dalka ayaa sheegay in warbixinti baaritaankii lagu samayay isku dhacyadii Tana Riiva oo ay ...	Gudiga doorahada iyo Xuduudaha oo dalbaday dhaqaale ay ku qabtaan doorshada ku celiska ah ee MKweni.	May 17, 2013 Gudiga doorshada iyo xuduudaha ayaa waxaa ay sheegeen in 300 ilaa 400 oo milyan ay u baahanyihiin si ...	Sports	Falcao ” Warka Mustaqbalkeyga Laga Sheegey Waa Been Abuur ”.	May 18, 2013 Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Radamel Falcaoayaa beeniyay in uu wax ka og yahay in ay jiraan wadahaadlo uu ...	Tababarahii Hore Ee Kooxda AC Milan Massimiliano Allegri oo U Wareegay Kooxda Roma	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa tibaaxay in tababaraha kooxda Massimiliano Allegri uu u wareegayo kooxda Roma marka ...	Seedorf Oo Loo Badinayo Inow Tababara Ka Noqdo Kooxda AC Milan	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa dhawaan sheegay in tababare Massimiliano Allegri uu ka tagayo kooxda isla markaana ...	David Moyes Kulanka So Socoto Maxoy Samedonaa ?? Maxadna Ku Qiyaasi Karta ?	May 18, 2013 Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United, David Moyes ayaa diyaar u ah in uu bilaabo shaqada kooxda United ...	Xidiga Barcelona Andres Iniesta Oo Aan Ku Faraxsaneyn La Joogitanka Kooxdaasi	May 18, 2013 Ninka labaad ee ugu wanaagsan kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa sheegay in uusan ku faraxsaneyn xiligan Barcelona .